Redis DBMS inopfuura mumaoko enharaunda, musiki wayo anosiya chirongwa | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura Redis DBMS musiki "Salvatore Sanfilippo" akafumura kuburikidza nechiziviso ndiani asingachabatanidzwe mukuchengetedzwa kweprojekti uye achapa nguva yake kune chimwe chinhu.
Sekureva kwaSalvatore Sanfilippo, mumakore achangopfuura basa rake rakadzikiswa kuita ongororo yechitatu-bato kuvandudza nekuchinja kodhi, asi izvi hazvisi izvo zvaaizoda kuita, sezvo iye achida kunyora kodhi uye kugadzira chimwe chinhu chitsva kugadzirisa kugadzirisa. mabasa maitiro.
Kunyangwe iye musiki weprojekti Salvatore Sanfilippo akaita danho rekusiya chirongwa ichi, Acharamba achiripo pane redisheni reRedis Labs bhodhi, asi zvinongogumira mukugadzira mazano.
Nguva kutonga, kusimudzira, uye kugadzirisa kweRedis DBMS kunoendeswa kunharaunda.
Pandakatanga chirongwa cheRedis anopfuura makore gumi apfuura, ndaive mune imwe yenguva dzinonakidza dzebasa rangu. Wangu co-muvambi uye isu takabudirira kuvhura maviri anotungamira ewebhu 2.0 masevhisi paItaly webhu.
Kuti zviite kuti zvive nyore, isu taifanirwa kugadzira akawanda matsva maficha, ayo aitozivikanwa mumunda nguva zhinji, asi isu hatina kuziva kana kutarisira kutarisa. Dambudziko? Tichawana mhinduro. Isu taida kugadzirisa matambudziko asi isu taida kunyangwe kutandara. Iyi yaive nharaunda yekutamba kwakazvarwa Redis.
Iye maneja weprojekiti aive yakaendeswa kuna Yossi Gottlieb naOran Agra, Avo vakabatsira Salvatore Sanfilippo mumakore achangopfuura, vanzwisise zvaakaratidzwa nezvechirongwa ichi, havana hanya nekuchengetedza mweya wenzanga yeRedis uye vanoziva kwazvo kodhi uye chimiro chemukati cheRedis.
Zvisinei, Kuenda kwaSalvatore Sanfilippo kunokatyamadza zvikuru munharaunda, sezvo iye achidzora zvachose matambudziko ese ebudiriro nemitambo, kazhinji, basa re "magnanimous dictator for life" kuburikidza naye zvese zvikumbiro zvekukanganisa nekubatanidzwa zvakaitwa, uyo akasarudza kuti zvikanganiso zvaizogadziriswa sei izvo zvitsva zvinofanirwa kuwedzerwa uye chii shanduko yekuvaka inogamuchirwa.
Izvo zvinokurudzirwa kugadzirisa mubvunzo wekutora imwe yekuwedzera modhi kuvandudza nekudyidzana nenharaunda nevatungamiriri vatsva vekuchengetedza avo vakatozivisa sisitimu nyowani yekutarisira iyo nharaunda ichabatanidzwa.
Chimiro chitsva cheprojekiti chinoreva kuwedzera kwekubatana, iyo inoyera kukura uye kugadzirisa maitiro. Iyo purojekiti iri kurongerwa kuvhurika uye kushamwaridzana yevatori vechikamu vemunharaunda, zvichiita kuti kuve nekushingaira uye kunobatsira kutora chikamu mukusimudzira.
Iyo yakarongedzwa manejimendi modhi inosanganisira diki diki revatungamiriri vanogadzira (yepakati timu), ndiani inosanganisira vatori vechikamu vakasarudzwa vanoziva kodhi, tora chikamu mukusimudzira uye unzwisise zvinangwa zvechirongwa.
Ini ndinosiya Redis mumaoko enharaunda yeRedis. Ndakabvunza vamwe vangu Yossi Gottlieb naOran Agra kuti varambe vachitsigira chirongwa kubva nhasi: ava ndivo vanhu vakandibatsira zvakanyanya mumakore achangopfuura, uye vakaedza zvakanyanya
Iye zvino, Iyo Core Chikwata inosanganisira vatatu Redis Labs vanogadzira: Yossi Gottlieb naOran Agra, avo vakatora nzvimbo sevatungamiriri vezvirongwa, naItamar Haber, vakatora nzvimbo sevatungamiriri venharaunda.
Munguva pfupi iri kutevera, zvakarongwa kusarudza nhengo dzinoverengeka dzemunharaunda yeCentral Team, yakasarudzwa zvichienderana nemupiro wavo mukusimudzira chirongwa.
Kuti uite sarudzo dzakakosha, senge shanduko dzakakosha kune iyo Redis musimboti, kuwedzera zvimiro zvitsva, kushandura serialization protocol, uye shanduko dzinotyora kuenderana, zviri nani kusvika kubvumirana pakati penhengo dzese dzeCore Team.
Sezvo nharaunda ichikura, Redis inogona kunge iine zvido zvitsva zvekuwedzera mashandiro ayoAsi vatungamiriri vatsva vanoti vanochengetedza hunhu hwakakosha hweprojekti sekutarisa mukugona uye nekumhanyisa kwebasa, vachirwira kureruka, chirevo chekuti "kunyangwe zvishoma, asi zvirinani" uye kusarudza mhinduro dzakakodzera nekukanganisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Redis DBMS inopfuura mumaoko enharaunda, musiki wayo anosiya chirongwa